Raharaha tonelina Ambanidia Nokorontanin�ny facebook Antananarivo
Nikoropaka ny ankamaroan�ny mponina teto Antananarivo omaly nanomboka tamin�ny 12 ora sy sasany antoandro noho ny resaka niely tany anaty tambajotra sosialy �facebook� fa nirodana ny tonelina Ambanidia, ka olona 80 no maty.
Omaly ihany dia namoaka fanambarana nandiso iny tsaho niteraka resa-be iny ny zandarimariam-pirenena ka niantso ny vahoaka ho tony ka hanohy am-pilaminana ny fiainany andavanandro toy ny mahazatra. Sokajiana ho heloka sy fandikan-dalàna any anaty tranokalam-pifandraisana na “Cybercriminalité” ny fanelezana vaovao tsy marina tahaka izao. Azo heverina ho asa fampihorohoroana sy fanakorontanana ny filaminam-bahoaka ihany koa, ka inoana fa tsy hoe ela dia voasambotra ny tompon’antoka. Raha ny resaka an-tariby nifanaovana tamin’ny mpitandro ny filaminana dia efa eo am-panaovana fanadihadiana mikasika ity fanelezana tsaho ity izy ireo amin’izao fotoana. Ho avy ny hazalambo. Maro amin’ireo mpikirakira ny “internet” sy ny “facebook” no mihevitra fa tsy ho tratra saingy tsy sarotra intsony ny mamantatra ny olona niaingan’ny hafatra mitory fandikan-dalàna toy izao noho ny fandrosoan’ny teknolojia.